Ukuhlolwa Kwezempilo Kwe-Akhawunti -
Njengomzimba womuntu odinga ukuhlolwa njalo kwezempilo ukuze ukhule futhi ukhule futhi uphile impilo ende, i-akhawunti yebhizinisi nayo idinga ukuhlolwa njalo 'kwempilo' yayo. Njengoba inhloso enkulu yanoma yiliphi ibhizinisi ukukhula nokuchuma ngenqubekela phambili engaguquki ekuthengisweni, kubaluleke kakhulu ukuba nalokhu kukhula ngaphandle kwamakhefu noma izithiyo. Impilo ye-akhawunti enhle yomthengisi ilingana nokuthengisa okuhle. Kodwa-ke, ukuhambisana namamethrikhi ahlukahlukene ezempilo ye-akhawunti yomthengisi kungaba ngumsebenzi onzima. Lokhu kuba nzima kakhulu ngenxa yemakethe enkulu yebhizinisi eliku-inthanethi. Ukuthola ukusekelwa ukukuqondisa nokusiza ekugcineni ibhalansi phakathi kwe-Order Defect Rate elinganiselwe, isilinganiso seLate Dispatch, kanye nezinga lokukhansela langaphambi kokugcwaliseka nokuthola ukuthengiswa okuhle kungaba umfutho omkhulu ebhizinisini futhi esikhathini esizayo kungavimbela ukumiswa kwe i-akhawunti.
Ithimba lethu likusiza ukuthi ugcine impilo ye-akhawunti yakho ye-Amazon futhi liseluleka ukuthi ugcine izinyathelo ezifanele zamapharamitha alandelayo:
Oda imihlahlandlela yokunciphisa ukukhubazeka
Indlela yokusebenza kwamakhasimende
Ukuphatha ukukhanselwa kwangaphambi kokugcwaliseka
Ukuhlolwa kwezempilo kwe-akhawunti akugcini nje ngokugcina ukukhula kwebhizinisi kuzinzile, kusiza futhi ukugcina ubudlelwane obuhle namakhasimende. Ithimba le-APlus Global lizibophezele ekwenzeni ibhizinisi le-e-commerce libe bushelelezi ngangokunokwenzeka kubo bonke.